Looska(Walnuts) waxa uu wanaagsan yahay nidaamka dheef-riddiqa/dheef-shiidka - Horn Future
Looska(Walnuts) waxa uu wanaagsan yahay nidaamka dheef-riddiqa/dheef-shiidka
Daraasad cusub oo Maraykan ah ayaa sheegtay in raacitaanka nidaam cunto oo uu qani ku yahay looska nuuca loo yaqaano (Walnuts /Isha-geela) in uu si weyn uga gaysto caafimaadka iyo badbaadinta nidaamka dheef-riddiqa/dheef-shiidka.
Daraasadan ayaa waxa sameeyay cilmi-baadhayaal katirsan jaamacada Louisiana oo kaashanaya Machadka Cilmi-baadhista Maraykanka ee Kansarka,taas oo lagu faafiyay website cilmiyeedka ama science ka ee (EurekAlert).
Kooxdan baadhayaalka ah ayaa waxay tijaabada daraasaddan ku sameeyeen koox jiir ah oo ay u qaybiyeen labo,iyaga oo ku quudiyay looskan koox kamdi ah jiirkan tiro u dhiganta heerka bini’aadamku cuno oo ah ilaa 60 gram maalintii, halka kooxda kale aynan cunin looskan,waxana daraasadani ay socotay illaa muddo gaadhaysa 10 toddobaad.
Cilmi-baadhayaasha ayaa waxay heleen kooxdii quudatay looska in lagu arkay korodh weyn oo ah (bacteria )yada nuuca loo yaqaano(beneficial intestinal bacteria) taas oo kaalin weyn ka qaadata caafimaadka habka dheef-riddiqa/dheef-shiidka.
Waxa bakteeriyadan (beneficial intestinal bacteria) ay kaalin ka qaadataa nuugista nafaqooyinka qaarkood iyo isku dheeli-tirka nolosha u dhexeeysa nuucyada kala duwan ee bakteeriyada ku jirta mindhiqiraha.
Cilmi- baarayaasha ayaa waxay sheegeen in caafimaadka mindhiqirku uu si toos ah ugu xidhan yahay caafimaadka guud ee jidhka intiisa kale, waxayna intaa ku dareen in daraasadoodani ay muujinayso in loosku uu xoojiyo caafimaadka habka dheef-riddiqa/dheef-shiidka.
« Indian court grants bail to Hindu armed group founder	» Imaaraadka Carabta oo joojisay taageerada Air Berlin markii Germany diiday go’doominta Qadar